Sajhasabal.com | Homeके भयो उपक्षेत्रीय अस्पतालको पत्रकार सम्मेलनमा ?
के भयो उपक्षेत्रीय अस्पतालको पत्रकार सम्मेलनमा ?
Posted on: 03 Oct, 2016
ललित बोहरा/असोज १७, डडेल्धुरा ।
सुरुवातमा अध्यक्ष लक्ष्मण सिहले पत्रकार सम्मेलको बारेमा जानकारी नै नदिई सञ्चार माध्यमा प्रशारण तथा प्रकाशीत समाचारहरुको बारेमा खण्डन गरे । र भने सुचना दिने ब्यक्ती को हो मलाई चाहीयो ? पत्रकारहरुको उत्तर थियो पत्रकारको अधिकारको कुरा हो । स्रोत नखोल्ने तपाई मुद्धा दिनु होस हामी प्रष्ट पारछै तर स्रोतको नाम खुल्न तयार छैन्नै । ठिक छ दिन नमीदो रहेछ भने अध्यक्ष सिंहले भने पछि चरका चरकी भने लामो समय भयो । त्यस पछि पत्रकारहरुले आजको पत्रकार सम्मेलको बिषय के हो त्यही मात्र उल्लेख गर्नु भन्दाँ त्यस पछि उहाँले गर्मी भयो एसी खोल्नु भनु भयो ।
उप–क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराको बिषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुको अस्पताल बिकाश समितीका अध्यक्ष ा सिंहले आपती रहेको बताए । सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरु सबै समाचार गलत भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले उप क्षेत्रीय अस्पताललाई ब्यबस्थीत र सुबिधा सम्पन्न बनाई सुदुरपरिचमका आम जनसमुदायलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरि सेवा गर्ने बाहेक मेरो अरु कुनै ब्यक्तीगत स्वार्थ नरहेको र ब्यक्तीगत स्वार्थपूर्तीको लागी अस्पताल जस्तो क्षेत्रलाई माध्यम बनाउने आफनो नैतिकताले नदिने पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्ट पारेका छन् । सम्मेलनमा अबैध कर्मचारी भर्नाको बिषमा अध्यक्ष सिंहले कुनै पनी कर्मचारीलाई नियुक्ती नदिएको र सबै स्वंमसेवक रहेको बताएका छन् ।
सञ्चार माध्यमा प्रकासित टेन्डर प्रक्रिया सम्बन्धी समाचार निराधार भएको र आफुले सबै काम टेन्डर प्रक्रियाबाट नै गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । यस्तै अस्पतालले भारतीय दुताबासको सहयोगमा नयाँ एम्बुलेनस प्राप्त गरेको,अस्पतालबाट प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधाहरु निरन्तर प्राबिधीक रुपमा सुधारोन्मुख रहेको ,केही दिन भित्रै बालरोग बिशेषज्ञ सहित ल्क्ष्ऋग् सेवा, क्ष्ऋग् स्त्रीरोग बिशेषज्ञ सहितको गाईनो सेवा,मुटुको अपीडी सेवा (प्रत्येक महिनाको एक दिन डा.आउने) लगायतका थप विशेषज्ञ सेवाहरु सुरु हुने अस्पताल ब्यस्थापन समीतीले एक प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
अस्पताललाई सुधारमा पत्रकारहरुले सधै सहयोग गर्न समेत अस्पताल स्रोतले आग्रह गरेको छ । अस्पतालमा भएको अनीयमीताको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न सबै सुचना र आर्थीक कारोबारका कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान शाखा कार्यालय कञ्चपुरले लगेको स्रोतले जनाएको छ । एक्कासी शुल्क बृद्धि किन भयो भने साझा सवालका जिल्ला सम्पादको प्रश्नमा उहाँले सबै सरकारी अस्पतालको शुल्क अनुसार नै आफुले शुल्क तोकेको बताए ।